कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनले पराजुलीको बचाऊ गर्दै अनसन तोड्न डा. केसीलाई आग्रह « News24 : Premium News Channel
२८ पुष २०७४, शुक्रबार
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनले पराजुलीको बचाऊ गर्दै अनसन तोड्न डा. केसीलाई आग्रह
काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएसन कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो जसले डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गरेका छन्। डा. केसीलाई अनसन बसेर न्यायालयमाथि दबाव नदिन आग्रह गरेको छ ।
अदालतको अवहेलना मुद्दा र सर्वोच्चको आदेशबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बार एशोसिएसनले पराजुलीको बचाउ गरेको हो। बारले अदालतको आदेशलाई सबैले पालना गर्नु पर्ने भन्दै अदालतको फैसलालाई लिएर स्वच्छ टिकाटिप्पणी मात्र नगरी व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्नु गलत भएको बताएको छ । बारले कुनै मुद्धामा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्नु परे न्याय परिषद् जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि स्मरण गराएको छ ।
बार एशोसिएसनले डा. केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेशको स्वागत पनि गरेको छ । अनसन स्थगित गर्न पनि आग्रह गरेको छ । सबै प्रकारकेा दबाव र प्रभाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अशोभनीय हुने हुँदा यस प्रकारका कार्य नगर्न महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।